Aadaa – Page 25 – Bilisummaa
Rooba gaffaa akkan taane wareegnni nuun duraa
Rooba gaffaa akkan taane wareegnni nuun duraa Badee xifaa akkan taane dhiignni goota maraa Seenaa gootota kheenyaa dhiigaan barreeysinaa Akka maqaan jiraatu barumarraan baraa Dahaama …
Qabsaawaan Ni Kufaa, Qabsoon Itti Fufa!
Irraanfachuu hin qabnuu hogguu haa yaadannuu, Haa wal yaadachiifnuu namuu haa qaabannuu, Waan dhaammatan qabuu gootowwan kaleessaa, Kan haqamuu hin qabne sammuu keenya keessaa. (2) …
Sab-boonaa-sab-boontuu, kan dubraa-dardaraa Manguddoo Oromoo, hawwanii fi dhiiraa Mee yaadhaa dhiroo seenaa bara dheeraa Hangudaay gabbataan lafa daabbaa mayraa Waan kale nu goote, manguddoon …
Abdii Boruutiin Har’a dhimmi Oromoo kamiiyyuu, seenaas ta’ee aadaan; Afaanis ta’ee wanti biraa dhimma siyaasaa ti yoon jedhe waanan dogoggore natti …
Ololli fi duulli itti heddoomus, qabsoon bilisummaa Oromoo galii hawwamu otuu hin gahin hin hafu
Abdii Boruutiin Mee ofis walis haa gaafannu: Qabsoo bilisummaa saba bal’aa dhiisii, waanuma fedhee yoo ta’e, wanti gaariin hawwamu tokko haa xinnaatus …
Uummata miliyoona afurtamaa ol ta’u keessaa, kumni shan (5000) dhabamuun qaanii guddaa mitii?
Abdii Boruutiin Barruu gabaabaa kana akkan dhiyeessu kan na taasise, rakkoolee uummata Oromoo ilaalchisee, waayee Waldaa Dargaggoota Oromoo Addunyaatiin (WDOAn) mata dure …
Afaan Ofii barachuun manarraa eegala.
Keessumaa biyya Alagaatti alagaa fuudhanii irraa dhalanii daa’ima ofii afaanii fii aadaa ofii barsiisuu jechuun sabboonummaa fii cichummaa gaafata. Keessuma dhalli Oromoo Ka abbaa fii …
Yaa Jiruu biyya Ormaa
Elemoon Wellestoota Oromoo hangafoota jedhaman keessa isa tokko yoo ta’u, Shoora inni artii Oromoo keessatti qabu bakka guuddaatu kennamaaf. Elemoon wallee isaa keessatti, weedduu aadaa, …
TVOMT Gaafif Deebii Artist Galaanee Bulbulaa Waliin goone hordofaa
Artist Galaanen artistii ummata birat beekkoma argachaa jiran keessa takka. Kanaaf Oromoonni martuu yeroo isheen wallee baafte bituudhan bira dhaabbadhaa.